Arimaha bulshada | Amalsweden
Amal Express Waxa ay mar kasta u taagan tahay in ay wax ka qabato arimaha bulshada iyo sida ay u hormarin laheyd hadii ay noqoto xag dhaqaale iyo xag waxbarasho.
Halkan hoose ayaa waxaad ka akhrisan kartaa waxii aan u qabanay bulshada. Hadii aan nahay Amal Express waxa aan markasta tiigsanaa in aan bulshada hormarinteeda ka shaqeyno.
Xaflad lagu qabtay Örebro oo ku saabsan barasha quraanka.
Stockholm:-Waxaa 07 March 2015 ka dhacay magaalada Stockholm ee dalka Sweden shir lagu daahfuray Kafaalo Magazine (KM) 2015 oo ay maalgalisay xawaalada Amal Express. Shirkaan oo ay ujeedadiisa ugu weyn aheyd rogrogida tarbiyadda iyo tacliinta jiilasha soo socda. Arinkaan oo ka mid ah mawduucyada ugu balaaran ee sanadkaan lagu falanqeeyo KM 2015.
Amal Express waxay u aragtaa faaiido badan inay ugu jirtu ka qeyb qaadashada daabacada Kafaalo Magazine oo ah joornaal ku qoran af-soomaali lagana heli karo mawduucyo muhiim u ah horumarka bulshada Soomaaliyeed.
+46 737 310 541
Xaflad lagu xirayey barashada quraanka kariimka oo lagu qabtay magaalada Örebro
Barnaamijka barashada quraanka ee lagu qabtay masaajidka Örebro. Waxaa ka soo qeyb galay sanadkaan ilaa 70 ardey oo ka kala yimid wadamada Denmark,Finland, France, Norwey iyo Sweden.
Amal Express ayaa waxa ay ka qeyb qaadatay fududeynta xafladda loo dhigayey ardada iyo maamulka.
Puntland Community Organisation ee magaalada Gothenburg ,Sweden oo kaashaneysa hayadda qalabeeynta cisbitaalada ee dalka Sweden iyo wasaaradda cafimaadka Puntland waxay qalabka cafimaadka ugu deeqdeen cisbitaalada ku yaal magaalada Bosaso ee gobolka bari iyo magaalada Baran ee gobolka Sanaag. Qalabkaa cafimaad waxa laga direy magaalada Gothenburg, taariikhdu marka ay aheyd 17 agooosto 2012, kaas oo gaarey magaalada Bosaso 30ka december 2012. Waxay jaaliyadda Puntland ee magaalada Gothenburg,Sweden mahad gaar ah u jeedineysaa Shirkada Amal Express oo bixisay 20% kharashkii ku baxay rarida qalabkaa.
Kafaalo Magazine ayaa ah magazine kahadla arimo kala duwan oo kusaabsan nolosha iyo horumarka dadka Soomaaliyeed. Nuqulkii ugu horeeyay ayaa ahaa mid aad u taataabtay Soomaalida kudhaqan Yurubta Galbeed, dhan dhaqaale, bulsho, shaqo, waxbarasho iyo siyaasadba. Amal Express waxay fududeysay kafaalo Confrence 2013